Crash ... tsy misy foo-foo azafady. | Martech Zone
Talata, Oktobra 10, 2006 Talata, Oktobra 10, 2006 Douglas Karr
Omaly no andro voalohany nodiako ary nivoaka aho. Androany nianjera aho. Toy ny maro, zavaboary mahazatra aho. Ny mahavariana dia ny fanaoko isan-kerinandro, na izany aza. Ny faran'ny faran'ny herinandro dia saika feno hetsika foana ka na inona na inona fahazarana nananako tamin'ny herinandro teo dia nifarana tamin'ny asabotsy hariva izany. Raha tara miasa aho amin'ny alatsinainy dia matetika aho tara mandritra ny herinandro. Raha tara aho amin'ny Alatsinainy… tara aho mandritra ny herinandro.
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia niasa aho ny faran'ny herinandro manontolo. Mizotra amin'ny famotsorana any am-piasana izahay, ary tsy latsaky ny 6 ny tetik'asa nifanolorako tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny fihetsika mandanjalanja, saingy mirona hitombo hatrany… ary miasa mafy kokoa hatrany aho. Omaly hariva dia nahatratra ahy ilay izy ary nikorisa aho. Androany alina, nianjera aho. Voahitsakitsaka aho. Ary nanjary fanombohana ratsy ny 'herinandron'ny fahazarana'. Reraka avy hatrany aho izao rehefa mody avy any am-piasana ary mety hahita ny torimasiko isan'alina rehefa mody. Argh.
Amin'ny lafiny mazava dia midika izany fa angatahina aho, zavatra tsara foana! Amin'ny lafiny ratsy, tsy tiako ny mijanona amin'ny asako. Manana fahatakaran-javatra tsara aho amin'ny famoahana fahalavorariana vs. amin'ny fanaterana. Tiako ny tonga lafatra. Halako fotsiny manatitra… na dia tsy ho fantatry ny mpanjifako mihitsy aza ny fahasamihafana. Ny fandefasana matetika dia midika fa volana maromaro taty aoriana dia hitako fa 'manamboatra' zavatra izay fantatro fa mety ho nataoko tonga lafatra tamin'ny fanaterana aho raha nanana fotoana fanampiny.
Ny marketing sy ny lozisialy dia matetika toy izao, sa tsy izany? Ny fe-potoana dia mitaky famonoana ary matetika dia manipy ny fahalavorariana. Matetika ny kalandrie no zava-dehibe kokoa noho ny valiny. Ny filana manome dia matanjaka noho ny filana manatitra tonga lafatra. Matetika aho dia mahatsikaritra fa aleon'ny mpanjifa sorona ny endri-javatra, ny fiasa ary ny hatsarana mba hahazoana zavatra eo am-pelatanany haingana kokoa fa tsy aoriana. Lesoka amerikanina ve ity? Mihazakazaka, mihazakazaka, mihazakazaka… fianjerana? Sa lesoka eran'izao tontolo izao?
Tsy miaro ny 'creep' aho. Creep dia rehefa ny famaritana ny fahavitana dia mitohy 'mandady' mandra-pahatonganao tsy mahavita tetikasa iray. Ataoko tsinontsinona ny 'mandady'. Na dia tsy misy mandady aza, ahoana no toa tsy ananantsika fotoana hampiharana tanteraka intsony?
Ao amin'ny Factory Chocolate South Bend, manafatra ny kafe any aho tsy misy foo-foo… Midika izany fa tsy sotro sôkôla, tsy misy crème whip, tsy misy serizy, tsy misy sôkôlà manapotsitra na hafafin'ny syrup… ny kafe fotsiny Tsy misy foo-foo mahazo ahy ny kafe, raha tsy miandry ny entana hafa.
Fanamarihana: Raha mbola tsy nankany amin'ny Orinasa Chocolate South Bend, tsy eo amin'ny toerana tsara ianao miaraka amin'ireo mpiasa mahafinaritra. Manana ny toetrany izy ireo… fa tsy drôna tsy misy saina. Ary amin'ny fotoana voalohany ahazoanao mocha tsara dia alao antoka fa hahazo ilay foo-foo. Mahafinaritra izany.
Miverina amin'ny hevitro… ny orinasa toa Google, Flickr, 37 famantarana ary ny fahombiazana maoderina hafa dia manipy ny 'foo foo'. Ireo olona ireo dia manangana rindrambaiko tsara tsy misy foo foo. Manangana rindranasa mahavita ilay asa izy ireo, ary hentitra fa tsy manao mihoatra noho izany. Mety io. Mety tsara izany. Ny sasany mety mieritreritra fa tsy 'tonga lafatra' na izany aza satria tsy manana foo-foo. Ny taham-pahombiazana lehibe sy ny fananganana zaza dia milaza amiko fa tsy marina ho an'ny maro an'isa izany. Tian'izy ireo fotsiny ny hanao ilay asa - hamaha ny olana! Voamariko amin'ny asako fa mandany fotoana betsaka amin'ny foo-foo izahay.
Manontany tena aho raha mianjera tsy misy foo foo.
Angamba mila manomboka mandamina ny fanaterana antsika amin'ity fomba ity isika mba hahafahantsika mitondra tsara kokoa sy haingana kokoa:
Foo-foo:Inona no hiantsoantsika azy? Ahoana ny fahitana azy? Inona avy ireo safidy azontsika apetraka ao? Inona no ataon'ny mpifaninana aminay? Inona no tadiavin'ny mpanjifanay? Rahoviana isika no mila manao izany?
Tsy misy foo-foo: Inona no hataony? Ahoana no hanaovany azy? Ahoana no andrasan'ny mpampiasa azy io? Inona no ilain'ny mpampiasa anay? Haharitra hafiriana vao vita io?
Mosh an'ny Sugar Sugar
16 Okt 2006 amin'ny 5:07 PM
Foo-foo, foo-foo…mbola miezaka mahazo ny dikan'izany mifandraika amin'ny rindrambaiko, fa tsy ny kafe. Miaraka amin'ny kafe dia toa tsotra izany, toy ny tamin'ny foo-foo dia ny zavatra hafa rehetra tsy kafe persay. Avy amin'ireo ohatry ny orinasanao izay manilika ny foo-foo, ny tranonkala 2.0 rehetra dia toa mifototra amin'ny 'fahatsorana' ny lozisialin'izy ireo, farafaharatsiny amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa, na amin'ny fomba fiasa na amin'ny endriny. Heveriko fa ny tena mahavery hevitra ahy dia ny hoe aiza no ametrahanao fanontaniana foo-foo vs. no foo-foo, satria tsy azoko antoka raha mamokatra foo-foo ny sasany amin'ireo fanontaniana ireo na tsia amin'ny sokajy iray.
Inona no iantsoana azy? Eny ary, google, flickr ary ny anarana ho an'ny lozisialy novolavolain'ny famantarana 37 dia toa manintona sy manan-danja avokoa, ary heveriko fa nisy fotoana nipoitra tamin'izy ireo. Ahoana no hijerena azy? Tsotra, madio, web 2.0…misy eritreritra indray no niditra tao amin'ireo orinasa ireo, safidy…mbola foo-foo hoy aho. Inona no ataon'ny mpifaninana amintsika, mbola zava-dehibe, raha mba hanao ny mifanohitra amin'izany, na farafaharatsiny tsy hanao izay ataony. Ny zavatra tadiavin'ny mpanjifa no zava-dehibe…izay heverin'ny mpanjifa fa tsy zava-dehibe. Rahoviana isika no tsy maintsy manao izany, mbola zava-dehibe, indrindra eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko aterineto.
Inona no hataony? Ahoana no hanaovana azy? Tsy misy foo-foo eto hoy aho. Ahoana no nanantenan'ny mpampiasa azy hanao izany? Amiko dia mety ho foo izany na tsy foo. Inona no ilain'ny mpampiasa antsika? Heveriko fa tsy foo eto. Hafiriana no hanaovana izany. Ok dia toa tsy foo amiko ny andiam-panontaniana faharoa. Ny andiany voalohany no tena nampisavoritaka ahy.
Ny fanontaniana lehibe indrindra amiko angamba dia ny hoe 'Nahoana no ilaina izany?'
16 Okt 2006 amin'ny 6:10 PM
Manaraka ny hevitro ianao. Mitovitovy be ireo fanontaniana ireo, fa izy rehetra dia mizara ho toy ny fanontaniana napetrakao… 'Nahoana no ilaina izany?'
Manana mpiara-miasa sy namana aho, Chris Baggott, izay tia manontany hoe "Inona no olana voavahany?". Ny anaran'ny fampiharana, ny endrika, ny safidy, ny fifaninanana, ny zavatra tadiavina, ny fotoana… ireo rehetra ireo dia dinihina amin'ny tontolon'ny rindrambaiko, saingy tsy anontaniana mihitsy… “Inona no olana voavahany?”
Tokony handany fotoana amin'ny fanontaniana mety isika, fa tsy handany fotoana be hamaly fanontaniana diso!